Best Ideal 24 Tattoo Ideas for Women - Tattoos Art Ideas
Ny 24 Thigh Tattoos Ide Ideal ho an'ny vehivavy
sonitattoo Novambra 25, 2016
Ny tatoazy mahery vaika dia ataon'ireo matihanina izay nampiofanana mba hahazoana antoka fa manana ny endrika tsara indrindra ianao. Raha manahy mikasika ny olona izay mahazo tatoazy avy amin'ny toerana tsy mahafinaritra eo amin'ny feny ianao, dia tokony hitandrina amin'ny trano fidiovana halehanao.
1. Fanehoana Super Thigh ho an'ny vehivavy
Ny elefant #thigh ny lanjan'ny ink dia nanjary anisan'ny ankafizin'ny vehivavy tia ny bibidia. Ny fitambarana amin'ny endriny ivelany dia ny mahatonga azy ho milay amin'ny hoditra. Ny loko eo amin'ny hoditry ny vehivavy dia tsy misy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny sary.
2. Ny fanandramana mampiavaka ny tendron-tsakafo ho an'ny vehivavy
Ny soavaly izay mifanaraka amin'ny firavaka dia afaka mijery tsara fotsiny ny fehin-damba iray. Ny fijerena sexier dia ny soavaly iray afaka manampy ny vehivavy hanatratra ny feny rehefa miaraka amin'ny voninkazo koa.
3. Tapa-kevitra ho an'ny zazavavy
Ny vehivavy dia mety maniry ny manampy ny fiainany amin'ny fingadahin-tsolika eo amin'ny feny rehefa manampy voninkazo izany. Ny loko mavokely amin'ny voninkazo dia manome ny karandoha ho endrika ivelany.
4. Ny lolo mofomamy tsara amin'ny totozy ho an'ny vehivavy
Lolo vavy tsara tarehy ary rehefa voasariky ny hoditry ny tovovavy izy ireo, ny lokony izay ampiasaina hanoratana ny lolo sy ny ravin'ahitra manodidina azy dia ny mahatonga ny lolo marevaka mahatalanjona mahatalanjona.
5. Zavakanto misy toto sy voninkazo ho an'ny vehivavy
Ny vorona mena sy ny loko marevaka maro miaraka amin'ny vorona maro loko no mahatonga ny fehiloha ho mijery tsara sy mahatalanjona eo amin'ny hoditry ny vehivavy.
6. Kely ny lion-koditra kendren'ny tazo ho an'ny zazavavy
Ny vehivavy dia afaka manararaotra ny mpanjaka # légal tao anaty pensilihazo tahaka ny fananganana fa izay te hahita izany dia te-haka izany. Azo atao ihany koa ny mamolavola ny hevitra araka ny tsiron'ny vehivavy.
7. Tattoo tato anaty tetikasa mamorona hevitra amin'ny fefy
Ny fandriampahaleman'ny lolozy eo amin'ny feny dia afaka manova ny fijery ny feny iray. Ny lokon'ny vorona sy ny fihazàna eo amin'ny hazo dia mampamirapiratra ny hatsembohana sy ny hafanana.
8. Ny tato amin'ny rafitra tato ho ato dia mamorona hevitra amin'ny fefy
Ny fanehoana an'io taolan-tehezana eo amin'ny feny io dia mety ho tratran'ny tatoazy mpahay siansa afaka mitondra ny famoronana ho an'ny toerana iray, ny feny.
9. Loko vatokely sy Rose Thigh Tattoo ink idea ho an'ny ankizivavy
Ny hevitra ankolaka amoron-tsofina sy raozy dia azo ampiasaina tsara mba hanampiana vehivavy iray izay te-handefa vaovao ho an'izao tontolo izao isaky ny mihetsika ny feny.
10. Tranokely tsotra telo tato-tattoo ho an'ny vehivavy
Ireo tatoazy mamelatra telo ireo dia mahafinaritra sy tsotra ary tsy mitovy amin'ny tattoos amin'ny ankapobeny izay mampiasa loko maro.
11. Voninkazo mamy sy liona mainty hoditra
Ny toetran'ny haizin'ny liona sy ny lokon'ny voninkazo dia manasitrana ny feon-damosin'ilay vehivavy amin'ny fanambarana saro-pady izay mandalo ny liona.
12. Ny miaramila mpiady japoney dia mamorona tato ho an'ny ankizivavy
Azonao atao ny manavaka azy toy ny vehivavy miaraka aminà tatoazy japoney japoney izay mahatonga ny olona iray hijoro amin'ny vahoaka tsy heno feo.
13. Mahavariana tato-tsakafo mahatsikaiky ho an'ny zazavavy
Ny tatoazy ho an'ny peacock dia mety ho tsara indrindra eo amin'ny fifehezan'ny vehivavy iray izay mankasitraka ny zavatra tsara eo amin'ny fiainana.
14. Fanontaniana mahaliana
Ny lokon'ny peratra eo afovoan'ny vorondolo dia mety tsara indrindra amin'ny fandikana ny tompony. Ity dia iray amin'ireo tatoazy tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny maha-vehivavy anao.
15. Tattoo raozy eo amin'ny fefy ambony
Ny tattoo rose no manjavozavo kokoa amin'ny loko mena eo afovoan'ireo voninkazo hafa mbola tsara amin'ny vehivavy.
16. Super tatoo matevina sy mainty vita amin'ny tendro roa
Ny hevitr'io #design mahavariana eo amin'ny feny io dia ny hahazoana antoka fa tsy mitovy amin'ny hafa ianao. Ny fomba fifangaroana loko dia mahavariana fotsiny.
17. Ny bibilava mamirapiratra lady thigh tattoo design ink hevitra
Mitadiava bibikely miaraka amin'ny tatoazy vavy tattoo #idea izay mety hampatahotra sy mampitony amin'ny fotoana iray.
18. Tattoo mahagagam-behivavy
Ny fanehoana an'io tatoazy io dia tsy azo resena ary tsy voatery ho sarotra. Ireo vehivavy izay mampiasa io hevitra tato ho ato io dia vehivavy hendry.
19. Liona tarehy tato anaty tononkalon'ny zavakanto eo amin'ny feny
Ny liona dia mitodika amin'ny tato-tarehy sary an-tsoratra izay hita eo amin'ny felatànan'ny vehivavy mampiseho ny tanjaky ny vehivavy izay mety tsy hiresaka akory.
20. Ny tantaran'ny nofinofy momba ny tato ho an'ny zazavavy
Ny tantaran'ny nofinofy nofinofisina dia hevitra iray azonao andramana eo amin'ny feny raha toa ka vonona ny handefitra voalohany ianao.
21. Peacock volo hoditra tato-tattoo ink ho an'ny vehivavy
Ny vorombola dia vorona lehibe ary tsara tarehy be. Ny fampiasana volon'ondry fotsy eo amin'ny hoditra dia milaza fotsiny fa mankasitraka ny fiainana sy ny hatsaranao.
22. Tapa-tavoahangy ambony tato-peo ho an'ny zazavavy
Ny tendron-tsofina ambony voan'arivony dia iray amin'ireo tatoazy mahatalanjona tattoo izay azon'ny rehetra ampiasaina.
23. Vorona, voninkazo ary mandefa tato ho an'ny tato ho an'ny taom-panafody amin'ny feny
Ny singa iray tahaka an'ity dia midika fotsiny fa zavatra iray ahafantaran'ilay tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny tsara indrindra amin'ny fampiasana rehetra.
24. Tattoo flower tattoo amin'ny ankizivavy ankizivavy
Ny lanjan'ny sary dia mankany: Pinterest.com, Tumblr.com, plus.google.com, vk.com, facebook.com, instagram.com, twitter.com ary flicker.com
tanana tatoazytattoo octopustatoazy ho an'ny zazavavyTattoo Feathertattoos voronatattoostatoazy voninkazotattoo cherry blossomtato ho an'ny vatofantsikaTatoazy ara-jeometrikaraozy tatoazytattoo ideasloto voninkazotattoo infinitycompass tattoonamana tattoos tsara indrindratattoos foottatoazy fokotattoos sleevetattoos crosstattoos ho an'ny lehilahymehndi designtatoazy lolotratra tatoazytattooscat tattoosAnkle TattoosHeart Tattoostattoos mahafatifatymozika tatoazydiamondra tattoofitiavana tatoazyarrow tattoomoon tattooselefanta tatoazykoi fish tattootattoos mpivadymasoandro tatoazyanjely tattoosrip tattoostattoos rahavavytattoo eyelion tattooseagle tattoostattoo watercolortattoos armNy zodiaka dia mampiseho tatoazyscorpion tattoohenna tattootattoos back